हिउँदे बालीको चालुपूँजी र धान बैंकीङ कार्यक्रमको अनुभव (२०७१)
नेपाल कृषि कम्पनीले सुनसरीको चिमडीदेखि एकम्बासम्म चारवटा सहकारीहरु बिर्जुधामी, सम्झना, सामूहिक र उर्जामार्फत करिब ७५० बिगहा जमिनमा हिउँदे बालीको लागि करिब रु. १ करोड ५० लाख बराबरको चालूपुँची परिचालन गर्‍यो । हिउँदे बाली अन्तर्गत गहुँ ६१७ बिगहामा र मकै १३३ बिगहामा गरियो । जसको नतिजा अनपेक्षित राम्रै रह्यो ।
तराईका धेरैजसो ठाउँमा साधन स्रोत तथा अनुभवको कमीले किसान प्राय: मूख्य बाली धानकै लागि खेती गर्छन् भने थोरै किसानहरु गहुँ र केहीले मकैको खेती गर्छन् । यी चारवटा सहकारीका किसानहरुमा पनि धेरैजसो पहिलो चोटी गहुँ तथा मकैका खेती गरे, जुन हाम्रा लागि निकै राम्रो अनुभव रह्यो ।
किसानहरुले गरेको खेतीबाट आफ्नो लागि राखेर बाँकी करिब ५१० टन धान अन्न बैकिङ गर्‍यो । जुन हामीले सोचेको भन्दा निकै कम परिमाण रह्यो ।
अन्न बैंकिङ असफल हुनुको मूख्य कारणहरु:
धान भण्डारण गरेदेखि नै यस वर्ष धानको भाउ बढ्दै बढेन, बरु बिक्री गर्ने समयमा उल्टै घटेर गयो ।
धान भण्डारण गर्ने गोदाम गाउँ खेतदेखि करिब ३० किमि टाढा हुनाले आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन निकै खर्चिलो र अप्ठेरो भयो ।
हाम्रो प्राथमिकता कम खर्चमा अधिक्तम खाद्यान्न उत्पादन गर्ने रहेको र सो खाद्यान्नलाई भण्डारण गरेर व्यापारिक कारोवार गर्दा नोक्सान परेको खण्डमा सहन शक्ति कम रहने अनुभव भयो ।
२००० टनको योजना बनाएको खाद्यान्न भण्डारण तथा बैकिङ कार्यक्रममा माथिको असहजताको कारण जम्मा जम्मी ५१० टन मात्रै भण्डारण भयो । जसमा कूल घाटा करिब रु. ४९ लाख रहन गयो । तसर्थ अब यस कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरियो ।
चालूपूँजी अन्तर्गत करिब ६१७ बिगहामा गहुँ खेती र १३३ बिगाहा मकै खेती गरियो । जसको अनुभव निम्नानुसार रह्यो :
समयमा लगाएको मकै अधिक्तममा १०.५ टन प्रति बिगहा उत्पादन भयो भने गहुँ २.६ टन प्रति बिगहा उत्पादन भयो । यसैगरि मंसिर मसान्तपछि लगाएको बालीहरुको उत्पादन तथ्यांकले घटेको देखायो ।
हिउँदे बालीहरु मकै र गहुँ दुबै यन्त्रबाट रोपिन सकिन्छ भन्ने सफल परीक्षण भयो ।
केही किसानहरुले दाउनीपछि चालूपूँजीको ऋण तिर्न आनाकानी गरेको पाइयो । सो ऋण रकम अहिले पनि उठन बाँकी नै छ ।
सहकारीहरुको संस्थागत एवं व्यवसायिक सञ्चालन पद्धति नरहेको कारण कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अव्यवस्थीत परिस्थिती रहेको र आम्दानी खर्चका हिसाबहरु दुरुस्त राख्न नसकेको पाइयो । यसैगरी योजना अनुसार व्यवस्थीत रुपले रकम पनि सञ्चालन गर्न नसकेको अनुभव रह्यो ।
सहकारीहरुले आफ्ना सदस्य किसानहरुको कृषि कार्यक्रम चूस्तताका साथ सञ्चालन गर्न नसकेको अनुभव भयो ।
मन्सुली धानको मूल्य प्रति केजी २२/२३ हुँदा चामलको मूल्य ३०/३२ रहन्छ र धानको मूल्यलाई भारतिय बजारले धेरै असर पार्छ । त्यसैकारण हाम्रो पूर्वको तराईमा बासमतिजस्तो अधिक्तम मूल्य पाउने धान यसपालिदेखि परीक्षण उत्पादन शुरु गरेका छौं ।
धान बैंकिङको घाटा साथसाथै फिलतो सहकारी व्यवस्थापन र उठेको रकमलाई अन्यत्र अव्यवस्थीत लगानीको कारण चारवटै सहकारी मिलाएर करिब ७३ लाख रुपैयाँ हिउँदेबाली चालूपूँजीको ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ ।